Affiliate Marketing Program - Jinhua Ecubmaker Technology Co. , Ltd.
အောင်မြင်သောလွှဲပြောင်းမှုတိုင်းအတွက်ကော်မရှင် ၈% အထိရနိုင်သည်
အောင်မြင်သောရည်ညွှန်းမှုများအတွက်ကော်မရှင်များတွင် ၈% အထိရယူပါ။ သင်ကြော်ငြာထားသောကုန်ပစ္စည်းများသာမကအရည်အချင်းပြည့်မီသော ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးမှကော်မရှင်များကိုရနိုင်သည် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြိုင်အဆိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်သင့်ဝင်ငွေကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။market05@zd3dp.com .
သငျသညျ 100k ကျော် youtube ကပရိတ်သတ်တွေနှင့်အတူ youtube ကပြန်လည်သုံးသပ်လျှင်
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုစမ်းသပ်ဘို့အခမဲ့နမူနာပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်အတူအကဲဖြတ်ပြီးတော့အွန်လိုင်းကထုတ်ပြန်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။market05@zd3dp.com .
Affiliate Program သည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၊ ကြေငြာသူများနှင့်ဘလော့ဂါများကိုသူတို့၏အသွားအလာကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါကြောင့်သင်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များကိုလမ်းညွှန်ရန်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝယ်ယူမှုနှင့်အစီအစဉ်များမှရရှိရန်လွယ်ကူသော link-building tools များကိုသုံးနိုင်သည်။
ဖန်တီးသူများ၊ ထုတ်ဝေသူများနှင့် blog- သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ecub နှင့်အတူဝင်ငွေရကြသူ gers-
ထုတ်လုပ်သူ Affiliate Program ကို။
တွဲဖက်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် 8% အထိဝင်ငွေ